Amava omfundi. Fumana Uncedo oludingayo ukuze uphumelele kwiYunivesithi yaseHodges
Wamkelekile kumava abafundi
Ukusuka kwabasandula ukubhaliswa kwi-alum, siziko lakho elisemthethweni lokukunceda ube ngumfundi ophumeleleyo apha kwiYunivesithi yaseHodges. Iiofisi zethu aIbekwe kufutshane okanye kwindawo ekufutshane nethala leencwadi kwiKhampasi yaseFort Myers kwiYunivesithi yaseHodges. Ukongeza, siyafumaneka kubo bonke abafundi ngefowuni kunye / okanye ngombhalo ngokunjalo.
Isebe lethu libonelela ngezixhobo nenkxaso kwezi ndawo zilandelayo:
Indawo yokuhlala yabafundi / iADA
Izicelo zendawo yokuhlala
IiNkonzo zeMfuno eziZodwa
ISicwangciso soNcedo lweSAP
Silapha ukunceda. Nceda imeyile impumelelo@hodges.edu okanye ubize 239-938-7730 ngemibuzo okanye ngesidingo sokucela iinkonzo.
Ukucebisa ngempumelelo yezifundo kubekwe embindini kwiofisi yamava aBafundi kwaye abaCebisi babelwe abafundi ngokusekwe kwinkqubo yabo yesidanga nakwisikolo semfundo. Uyakhuthazwa ukwakha ubudlelwane noMcebisi ngamava akho aBafundi kwaye uqhagamshele rhoqo kwisikhokelo kunye nenkxaso kwiinjongo zakho zemfundo.
Abafundi abatsha, kunye nabo babuyela kwiYunivesithi, bayakhuthazwa ukuba bagqibezele inkqubo yokuziqhelanisa ne-Intanethi ephuhliswe ngamava abafundi. Ukuqhelaniswa nokuqhelaniswa kuya kukwazisa ngezixhobo ezikhoyo zokuphumelela ezifundweni kwaye kukuxhase xa ujonga amava eyunivesithi.
Isikhokelo sabaFundi kunye nokuGqwetha
Abacebisi ngamava aBafundi bakunika isikhokelo ngokubhekisele kwimibuzo kunye neenkxalabo, besenza unxibelelwano ukusombulula iingxaki ezinokuvela. Ukuhanjiswa kweengcebiso kuyafumaneka xa kukho imfuneko. Ubhengezo kunye nokucebisa malunga neenkxalabo zemfundo amaxesha ngamaxesha kuqala kumava aBafundi. Abafundi kufuneka bafikelele kumcebisi wabo wamava abafundi njengeyona ndawo iphambili yokunxibelelana nemibuzo kunye neenkxalabo.
Ulwazi lwaMazwe ngaMazwe
IYunivesithi yaseHodges inikezelwe kwimpumelelo yakho yokufunda, kwaye ikuxhase ekuhambeni kwamava eyunivesithi uya kunikwa uMcebisi wamava wabafundi. Abacebisi kwiYunivesithi yaseHodges banceda abafundi ekukhetheni ikhosi kunye nokucwangcisela imfundo ukuqinisekisa amava aphumelele eyunivesithi.
Abafundi beF1 kufuneka babhekise kwifayile ye- Isikhokelo saBafundi beZizwe ngeZizwe okanye Gcina iMeko yakho Iiwebhusayithi zoKhuseleko lwasekhaya kulwazi oluza kuludinga ukugcina imeko yomfundi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nxibelelana neGosa elichongiweyo leSikolo (i-DSO) kwiOfisi yamava abafundi.
IOfisi yamava aBafundi ikwabonelela ngengcebiso ngamakhondo omsebenzi ukukunceda ngokumisela umsebenzi wamaphupha akho. Ukusuka phinda Uqalele imigaqo kudliwanondlebe neengcebiso, silapha ukukunceda.
Uncedo lwaBafundi kunye neAlumni
Ukuphononongwa kwamakhondo kunye novavanyo
Ulwazi lomqeshi kunye nemakethi yezabasebenzi, kubandakanya nokugaya abantu ekhampasini kunye ne fairs zomsebenzi
Qhagamshelana Umsebenzi weZibonelelo kumazantsi mpuma eFlorida ngubani ozimisele ukukunceda ufumane isikhundla oza kusithanda
Ibhodi yomsebenzi kwi-Intanethi ( www.collegecentral.com/hodges)
Imisebenzi yeposi ejolise kubafundi kunye nabadala esikolweni sethu
Imisebenzi yokukhangela eposwe esikolweni sethu
Thumela amathuba omsebenzi kunye nokuqeqeshelwa umsebenzi kwibhodi yethu yomsebenzi kwi-Intanethi (www.collegecentral.com/hodges)
Yongeza ikhonkco lewebhusayithi yenkampani yakho kwiphepha labaQeshi baseKhaya
Ukufunwa kwabafundi ekhampasini ngokusebenzisa iNkqubo yoMsebenzi woMbane
Intengiso yasimahla yeziganeko zokuqesha ezizodwa
Ukuthatha inxaxheba kwimiboniso yemisebenzi
Sizimisele ukubonelela ngokufikelela ngokulinganayo kunye namathuba alinganayo kubafundi bethu. Abafundi abanenkxalabo yokukhubazeka kufuneka banxibelelane nathi ukucwangcisa uqeqesho kwiziko, okanye ukuxoxa ngayo nayiphi na inkxaso eyimfuneko ekugqityweni kwenkqubo yokufunda. Nabani na ofuna uncedo makanxibelelane noMququzeleli wamava aBafundi ngokuthe ngqo okanye nge-imeyile impumelelo@hodges.edu; ifowuni: 800-466-0019.
Olunye ulwazi malunga neendawo zokuhlala zabafundi lunokufumaneka kuthi Handbook Handbook.
IYunivesithi yaseHodges izinikele ekugcineni imeko yemfundo ngaphandle kocalucalulo kunye nokuhlukumeza kwaye injongo yethu kukuba iinkxalabo zabafundi zisonjululwe ngokukhawuleza kwaye zisonjululwe ngendlela efanelekileyo kuwo onke amaqela abandakanyekayo. Ukuba uziva ngathi nayiphi na imeko ekuchaphazelayo ayinabulungisa, iyacalucalula, okanye idala ubunzima obungafunekiyo, nxibelelana neSebe laMava aBafundi ngokukhawuleza ukuze sisebenze kwisisombululo.
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya.
IYunivesithi yaseHodges iseke imigangatho yemfundo kunye nokuziphatha kunye nezikhokelo zokuphucula ulwazi lomfundi kunye noxanduva kuluntu lwaseYunivesithi nakwiziko. Abafundi abophula iMigangatho yokuziPhatha kwabafundi baphantsi kwenkqubo esesikweni ngelixa izityholo zivavanywa kwaye kumiselwa amanyathelo oluleko.